VfxAlert calaamadaha leh tilmaamayaasha Bill Williams | vfxAlert official blog
VfxAlert calaamadaha leh tilmaamayaasha Bill Williams
Hantida kasta oo maaliyadeed 70-80% ee maalinta ganacsiga waxay u guurtaa gudaha safaf ballacyo kala duwan leh oo kaliya 20-30% waqtiga dhaqdhaqaaqa xoogan iyo jihada ayaa la arkaa, halkaas oo aad ka heli karto faa'iido wanaagsan. Laakiin dhibaatada ugu weyn ee sida loo sameeyo ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ayaa ah go'aaminta daqiiqadda marka isbeddelku bilaabmayo maxaa yeelay tilmaame kasta oo farsamo ayaa leh dib u dhac, oo aan gebi ahaanba la baabi'in karin. Mid ka mid ah xalka dhibaatadan ayaa noqon doonta Bill Williams 'Alligator iyo Awesome Oscillator tilmaamayaasha macaashka xasilan xitaa xaaladaha ganacsi ee aadka u sarreeya (HFT).
Aynu ku bilowno kuwa casriga ah, eeg tusaalooyinka calaamadaha binary vfxAlert.
Sawirka bidix, dhammaan shuruudaha loogu talagalay xulashada Wicitaanka. Calaamadaha vfxAlert ee xoogan, dhammaan tilmaamaha Alligator ee ka hooseeya qiimaha iyo kor u kaca.
Jaantuska saxda ah ayaa fidsan, dhammaan tilmaamayaasha iyo calaamadaha ganacsiga ikhtiyaariga ah ee loo yaqaan 'vfxAlert' waxay muujinayaan sii waditaankeeda. Maxaa la gudboon ganacsade? Jawaab: ka bood boodhka.
Waxaan marwalba bilawnaa ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo iskujira "vfxAlert astaamaha binary live + tilmaamayaasha Williams " ee koontada demo. Waxaad kaliya heleysaa talooyin waana inaad hubisaa inay ku habboon yihiin istiraatiijiyaddaada, kalfadhiga ganacsiga iyo qaabka ganacsiga.
Calaamadda ugu horreysa waa isgoyska Oscillator-ka loo yaqaan 'Awesome Oscillator' ee heerarka eber iyo xaqiijinta laga helayo 'RSI' ee vfxAlert signal. Laba oscillators ayaa muujinaya kor u kaca oo waad furi kartaa CALL-option.
Sawirka labaad, suuq gees ah oo loogu talagalay GBP / JPY lamaanaha lacagta. Wax walba waxay ku tilmaamayaan tan: shaxda qiimaha, Oscillatorka 'Awesome Oscillator' iyo 'vfxAlert' oo leh «Awood daciif ah». Ganacsaduhu wuxuu dhaafayaa calaamadda.
Laba calaamadaha vfxAlert oo leh tilmaamayaasha Williams.
Istaraatiijiyadda caadiga ah ee ku saleysan laba tilmaame iyo xaqiijinta laga soo qaatay laba waqti (oo loogu talagalay GBP / USD, dib u noqosho 5 iyo 15 daqiiqo ah). Ganacsaduhu wuxuu si joogto ah ula socdaa fursadaha furan. Marka ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah muujiyo, waxaan xirnaa jagooyin ama kuwo cusub ayaan u fureynaa sida GBP / USD.
Aan soo koobno . Cilladaha ugu weyni waa go’aanka Williams ee ah inuu isticmaalo tusayaasha Celceliska Dhaqdhaqaaqa, kuwaas oo ah aaladda farsamada ee ugu hooseysa, in kasta oo xilligiisii suuqyadu ahaayeen kuwo aan isbeddel badnayn, tanina waa xal wanaagsan. Laakiin haddii calaamadaha binary ee nool ay xaqiijinayaan oscillators on timeframes ka sareeya H1 iyo ka sareeya, Alligator iyo Awesome Oscillator waxay kuu oggolaanayaan inaad si kalsooni leh u qaadato ugu yaraan 60-70% isbeddel kasta.